China Umhambisi Wokufuna i-CO2 Laser yokwahlulahlula kunye neMelika CO2 RF Tube ukwenziwa kunye nefektri | GGLT
Umhambisi Ufuna i-CO2 Laser ye-Fractional neMelika CO2 RF Tube
I-laser ye-CO2 yezahlulo kunye ne-America CO2 RF ityhubhu yinkqubo entsha yonyango lwelaser edala indawo ezenzakeleyo ezincinci zokulimala kobushushu obulawulwayo, ubunzulu, kunye noxinano olujikelezwe ligumbi lokulondolozwa kwesikhumba kunye neethambo zedermal, ezivumela ukulungiswa ngokukhawuleza kwe-laser ukwenzakala kobushushu. Le modali yahlukileyo, ukuba iphunyezwe ngeendlela ezifanelekileyo zokuhanjiswa kwelaser, yenza ukuba kunyangwe amandla aphezulu ngelixa kuncitshiswa umngcipheko.
-10.4 Inch touch screen
-9 Iindidi zeelwimi
-I-South Korea ingenise ingalo edibeneyo ye-7 ukuya kuthi ga kwi-360 ° ukujikeleza, i-angle yonyango nganye inokulungiswa
-Ukufikelela kwe-RF yengqondo kwi-tube ye-RF
· Ubumbano oluntsonkothileyo
· Umgangatho obalaseleyo womthi
Ityhubhu yengqondo, engatyhilwanga, iipesenti ezi-0 emva kwengxaki yokuthengisa
· Iiyure ezingama-30,000, iminyaka esi-8 ukuya kweli-12 yobomi
Uphawu 1.Stretch amanxeba egudileyo ezifana amanxeba yotyando, amabala bumf, amabala induna njl
Ukuhlaziywa kwesikhumba kunye nokubekwa ngokutsha, ukubuyiswa komonakalo welanga
Ukususwa kombimbi 3.Ukuqinisa ulusu
Ukususwa kwe-pigmentation njenge-chloasmas engenakuthinteka, amabala obudala, amabala amachaphaza njl njl
Unyango lwe-6 lobufazi, ukuqiniswa kwelungu lobufazi, ubumhlophe obusisi, ukungahambelani kwendalo
Umba Izahlulo ze-Co2 Laser Acne Scar Laser
Amandla okukhupha i-laser 60w
Q1: Leliphi ixesha lokuhambisa?
I-A1: 3-7 iintsuku zomsebenzi ngokuchasene ne-100% yentlawulo kwangaphambili.
Q2: Yintoni iphakheji?
I-A2: Ityala elinamandla kunye nenhle yealuminiyam / ibhokisi yebhokisi / imeko yeplanga.
Q3: Ngaba unayo nayiphi na inkxaso yetekhnoloji ngexesha elifanelekileyo?
I-A3: sinobuchwephesha bobuchwephesha obuxhasa iqela leenkonzo zakho ezisexesheni. Silungiselela amaxwebhu obuchwephesha, unganxibelelana nathi ngomnxeba, ngewebhu, ngencoko ye-Intanethi (Whatsapp, Viber, skype, Wechat…).
Q4: Yeyiphi indlela yokuhlawula?
I-A4: T / T, UMBUTHO WENTSHONA KOLONI, IGRAM YEMALI, IKHADI LOKUXHASWA NGAMATYALA, IPAYPAL… Nayiphi na imibuzo, pls zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nanini na ufuna, siya kuphendula ngeenkcukacha ngokukhawuleza!
Egqithileyo I-CE ivume i-co2 laser fractional machine 60w
Okulandelayo: Fractional CO2 Laser Acne Scar Laser Susa Umatshini
Fractional CO2 laser umatshini ulusu lobomi
I-co2 ephathekayo ye-laser ukususwa kwemibimbi yokususwa ...